सम्पूर्ण संसार सोचिरहेको छ किन उनीहरू एक साथ छन्: 11 धेरै असाधारण जोडीहरू
प्रेम एक अजीब चीज हो, यो कहिलेकाहीँ बिल्कुल अलग मान्छे जो, यो देखिन्छ, र एक साथ हुन हुँदैन। यो केवल चकित र पक्षबाट हेर्नु मात्र हो।
रूसी शो व्यापारको सबै भन्दा चर्चा र असाधारण जोडाको साथ सुरू गरौं - दिवा अला बोरस्कोना पोगाचेवा र उनको जवान पति हास्यकारक र अभिनेता मैक्सिम गल्किन । उमेरमा एक ठूल भिन्नता (27 वर्ष!) यी श्रीमान्हरूले धेरै प्रशंसकहरूलाई आराम गर्दैनन्, उनीहरूले आलोचना र विनाशको आक्रोश लगातार ढल्दैछन्। तर यसले 10 बर्ष भन्दा बढीका लागि एकसाथ बस्न सकेन र दुई अचम्मको बच्चा ल्याउन सकेन।
एक समान टिन्डेम अमेरिकन सिनेमा मारी केट ओल्सन र बैंकर ओलिभर सर्र्कोजी को अभिनेत्री द्वारा बनाईएको थियो। तर यहाँ यो अधिक से अधिक तलब हो, ओल्सेन 28 र जबर्कोजी 45, जब उनको रोमान्स शुरू भयो, तर व्यक्तिगत रूप मा उनि बिल्कुल परेशान नहीं गरे।
Nikita Dzhigurda र मरीना Anisina सँगसँगै कसरी फरक फरक छ भन्ने बुझ्न कठिन छ। उनी आवेगजनक, द्रुत-स्वभावपूर्ण, असफलता, उनको छवि घृणित छ, र उनी एक ओलम्पिक च्याम्पियन हो, विश्वको विजेता चित्रा स्केटिङ च्याम्पियनसिप, चालाक र सजिलै सुन्दर। त्यहाँ कुनै व्याख्याहरू छैनन् - यो केवल प्रेम हो।
रोबर्ट पट्टिन्सन र टेलिया बर्नाटले उनीहरूको भावनाको घोषणा गर्दा प्रशंसकहरू बीचको रौतहट गरे। धेरै पटिन्ससनको उत्साहले पनि उनको नयाँ महिलालाई उनको प्रभावमा असर पारेको थियो। तर जोड़ी धेरै वर्षको लागि एक साथ भएको छ, र तिनीहरूलाई हेर्दै त्यहाँ कुनै पनि संदेह छैन कि तिनीहरू खुसी छन्।
निस्सन्देह, हामी अजीब, डरलाग्दो जोडालाई ध्यान दिन सक्दैनौं - यो मार्लिन म्यानसन , एक पागल रक संगीतकार र दलित वान टिसेको तारा हो। यो स्पष्ट छ कसरी यो मीठो महिलाले यस्तो व्यक्तिसँग बाँच्ने साहस थियो। र यो पनि एक रहस्य बनी रहयो कि उनि कसरि उनको सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी बिताए।
जोडा वुडी एलेन र कोरियाली सूर्य-म न केवल 35 वर्षको उमेरमा फरक फरक कारणले हाम्रो सूचीमा पाईन्छ, तर सुर्यले एलेनूलाई छोरीलाई भने। एकपटक वुडी र तिनकी श्रीमती मिया फररोले कोरियन आठ वर्षकी केटीलाई एकपटक स्वीकारे, तर धेरै वर्ष पछि यो थाहा पाएको थियो कि प्रसिद्ध निर्देशक र उनको नामको छोरी न केवल अभिभावक सम्बन्ध संग। र मिया संग ब्रेक पछि, वुडीले तुरुन्तै आफ्नो स्वीकृत छोरीलाई प्रस्ताव गरे।
श्रृंखला "सेक्स र सिटी", र सिन्थिया नाइसनको जीवनमा मराठीले सबैलाई आश्चर्यचकित गर्दै, आफ्नो पति, जसले धेरै वर्षको लागि विवाहमा बस्न छोडे र दुई छोराछोरीलाई जन्म दिए, एक महिलालाई र यस्तो अजीब उपस्थितिको साथ पनि छोडे। यो अफवाह छ कि सिन्थिया पनि उनको नयाँ जीवनमा खराब कुरा हेर्न थालिन्।
तर सित्तियारको अयोग्य छनोटसँग मात्र ताराहरूले अचम्म लाग्न सक्दैन, र साधारण मानिसहरूसँग यस्तो उदाहरणहरू छन्, कहिलेकाहीँ हलिउड वा Mosfilm भन्दा बढी आश्चर्यजनक। उदाहरणका लागि, एक जोडासँग विकासमा ठूलो भिन्नता छ। के यो अचम्म छैन?
छालाको रंग, राष्ट्रीयता र धर्म पनि, प्रेमको बाटोमा अवरोध नहुनु हुँदैन।
स्टेरियोटाइपहरू नष्ट गर्ने सबै पुरुषहरू, अपवाद बिना, पतला केटीहरू जस्ता, हामी एक दोहोर्याउँछ जसले यसलाई अस्वीकार गर्दछ।
और जुडाइहरु को विवाहित जोडीहरु लाई आफुहरु को बिरुद्ध पारिवारिक खुशी को लागि चुनिएको छ। आखिर, प्रेम यस्तो अद्भुत भावना हो, र जब यो द्वन्द्व हो, यसले फरक फरक वा फरक पार्दैन, मुख्य कुरा भनेको तपाईंले एकअर्कालाई भेट्नुभयो र एक साथ खुसी हुनुहुन्छ।
24 आधुनिक हर्कुलस को अविश्वसनीय शोषण
25 अविश्वसनीय घटना जुन ठाउँमा भयो
लेह समस्या सुरु भयो, वा यो सबै कहाँ विश्व प्रसिद्ध कम्पनीहरूको साथ सुरु भयो?
कन्नबलिवाद को बारे मा 25 भयानक तथ्यहरु
यस कलाकारको गुड़िया यति यथार्थवादी छ कि तपाईले मात्र डर लाग्छ!
शीर्ष 15-15 ट्रेन्ड्स90 बाट आउँछ
वैज्ञानिस्टहरूले व्यापक कथाहरू - 30 सत्य तथ्यहरू खारेज गरेका छन्
जब Google ले मद्दत गर्दैन
14 तपाईलाई अझ नजिक विचार गर्न चाहिएको फ्रेमहरू!
सम्मोहनको बारेमा 25 आकर्षक तथ्यहरू
Rh and conflict between mother and fetus
कसरी राम्ररी स्तनपान गर्ने?
भाग्य को अर्थ कफी आधार मा बताईयो
एंटी एजिंग मेसोकोटाइल
बच्चाले खाना खाने पछि रोकिन्छ
पतलूनमा चमक कसरी हटाउने?
फलों को आहार - प्रति सप्ताह 10 किलोग्राम
Airedale टेरियर Puppies
चेरी ब्लासो किन हुन्छ, तर फल सहन गर्दैन?
ऊस कसरी उपयोगी छ - कसरी रोगहरु को उपचार को लागि जई बियर कसरि?
बैटरमा पोर्क - हरेक दिनको लागि स्वादिष्ट व्यञ्जनको सबैभन्दा राम्रो व्यञ्जन
महँगो विवाहको पोशाक 2015
गोभीको साथ पाई खोल्नुहोस्
स्याउले लेन्स पाई
के पैर वा खुट्टामा पीडाहरू छन्?
गर्भावस्थाको बेला विल्फ्राफेन